Mayelana nathi - Chapman Technology Co., Ltd.
Siyakwamukela ku UMenzi weChapman inkampani, Yasungulwa ngo-2008 Sine isitifiketi SGS kanye ISO 9001 ukuphathwa izinga uhlelo.
Sigxila epulasitiki ekubumbeni ukuthuthukiswa; ukubumba odongeni okuncane nokujiyile, ukubumbana okuqinile, ukubunjwa kwe-LSR, ukuthuthukiswa komkhiqizo omusha nokuhlangana. Sisebenzela izimakethe eziningi kubandakanya ezezimboni, ezezimoto, ezokwelapha, ezobuchwepheshe, ezokuvikela, ezokuhamba kanye nomthengi. Sihlala sikweqa okulindelwe yikhasimende lethu ngokunika amandla bonke abantu esisebenzisana nabo nokwakha isiko elamukela ukwenziwa ngcono, ukukhiqizwa kokuncika kanye nokusebenzisana kokuthengiselana ukuze kuqinisekiswe inani eliphakeme kumakhasimende ethu.
Isikhunta insimu, UMenzi weChapman ugxile ekuklameni nasekukhiqizeni zonke izinhlobo zesikhunta seplastiki ngeHASCO, i-DME, i-LKM, i-MISUMI ejwayelekile ngokuhlaziywa kwesikhunta. Sinikeza i-DFM kumakhasimende ngezinsuku ezi-2 zokwakhiwa kwesikhunta ngokusebenza kahle okukhulu. Sinikeza ngekhwalithi enhle kanye nensizakalo enhle kumakhasimende aphesheya ngombiko wamasonto onke wenqubo yokukhiqiza.
Inkambu yokuthuthukiswa komkhiqizo, Masenze umqondo wakho ube ngumkhiqizo ophathekayo nothengiswayo. Sinesifiso sokuxazulula izinkinga ngokuhlaziya okuphelele nokuklama okucabangayo. Ngobunjiniyela, ukuklama, ukuhlela, nokukhiqiza endlini, akukho lutho esingeke sikwazi ukukwenza.
UMenzi weChapmaninamandla adingekayo okuqedela amaphrojekthi ngesheduli, amakhono asethelwe ukubhekana nenqubo yentuthuko njengoba kudingeka, kanye nobuchule bokuthola izixazululo zezinkinga ezinzima kakhulu. Ngokuhlanganisa ukuklama nobunjiniyela ndawonye, ​​sithatha imibono iye phambili, ngokushesha, sinikeze amaklayenti ethu imiklamo eqhutshwa ngabathengi, ekhiqiza izinto ngaphansi kwamashejuli aqinile.
Ukucabanga kwethu kwesithombe okukhulu kugcina izinhloso zakho ziphambili futhi ziphakathi nendawo. Sisiza amaklayenti ethu aklame futhi alethe emakethe okuhlangenwe nakho okuthuthukisa umkhiqizo wabo nokudlulela ngale kwezidingo zabathengi. Ukusebenzisana kuklanyelwe ukucindezela ezingeni lomzimba nangokomzwelo futhi kuyisiqinisekiso sesithembiso somkhiqizo wamakhasimende ethu. Ukugxila kwethu kusezinhlosweni zokuphela kwamakhasimende ethu. Noma ngabe kuyizinhloso zebhizinisi, imigomo yomkhiqizo, noma imigomo yeshejuli sisebenza ngokubambisana namakhasimende ethu ukuze siyifinyelele.
Sinikeza insizakalo yokumisa eyodwa kumakhasimende ngokuqamba okuhle, ukuklama, ubunjiniyela, ikhono lokuphatha nekhwalithi nentengo yokuncintisana.
"Ukwakha inani lamakhasimende nokulenza liphelele" yifilosofi yethu. Uzobona inzuzo enkulu ngokusebenza ngokubambisana UMenzi weChapman!